Cusbooneysii sidoo kale macOS Catalina 10.15.7 | Waxaan ka socdaa mac
Mana aha oo kaliya inaan ka harno imaatinka nooca cusub ee macOS Big Sur kaas oo warar dheeri ah lagu daro, Apple ayaa sidoo kale gelinkii dambe ee shalay bilaabay casriyeyn dhanka amniga ah oo loogu talagalay dadka isticmaala ee ku nagaaday macOS Catalina. Xaaladdan oo kale, nooca 10.15.7 kuma dari doono isbeddellada ku dhaca hawlgalka laftiisa, waa ku saabsan tahay nooc ka mid ah hagaajinta nidaamka iyo cilladaha cilladaha taas oo ku dhacda baaxadda Apple ee kombiyuutarada aan gaarin macOS Big Sur.
Marka dhammaan adeegsadayaashaas oo aniga oo kale ah, koox leh MacOS Catalina Hadda waad rakibi kartaa noocyadan cusub ee ku daraya isbeddelada amniga iyo xasilloonida nidaamka. Aynu aragno, badanaa kama tagayo noocyadii ka horreeyay kii ugu dambeeyay ee la sii daayay iyo sida aan ku aragno kiiskan waxay sii wadaan inay saxaan khaladaadka noocyadii hore.
Sida noocyadii hore ee ay sii daayeen Apple iyo kuwa soo socda, tallada kiiskan ayaa ah inaad cusboonaysiiso sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aad u hesho ku daray horumarin xagga amniga iyo xasiloonida nidaamka hawlgalka oo aad ka faa'iideysato sixitaanka la hirgeliyey. Noocyadan, sidaad ogtahay, gebi ahaanba waa bilaash, markaa waxaan kugula talineynaa inaad sida ugu dhakhsaha badan u rakibto.
Haddii ay dhacdo inaad cusbooneysiin otomaatig ah naafo noqoto, waa inaad toos uga soo gasho Nidaamka Xulashada oo guji gudaha xulashada Updates. Markaad gasho, waxay ku tusi doontaa ikhtiyaarka aad ku cusboonaysiin karto haddii loo baahdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Catalina » Cusboonaysii sidoo kale macOS Catalina 10.15.7